डब्ल्यूएचओको प्रोटोकलका कारण नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या धेरै ! – Dcnepal
डब्ल्यूएचओको प्रोटोकलका कारण नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या धेरै !
विशेषज्ञ भन्छन्–कोरोना सहायक हो
प्रकाशित : २०७७ भदौ २२ गते १४:०७
काठमाडौं। सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ८९ पुगेको छ। गत चैत ११ गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउन औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको दिन साउन ६ गतसम्म करिव ४० जनाको मात्र कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। साउन ६ गतेपछि करिव २ सय ५० जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सम्बोधनको क्रममा नेपालमा मृत्यु भएकाहरुमा कोराना पोजेटिभ देखिए पनि सबैको कोरोना कै कारण मृत्यु नभएको बताएका थिए। उनले अन्य रोगले मृत्यु भएकाहरुलाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कोरोना परीक्षण गर्नु पर्ने र पोजेटिभ देखिए कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भन्नु पर्ने प्रोटोकलका आधारमा नेपालमा कोरोनाका काराण मृत्यु हुनेको संख्या बढेको बताएका थिए।
तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला भने कोरोना नै मृत्युको कारक भएको बताउँछन्। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै डा.कोइरालाले अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमण भएपछि मृत्युको लागि सहायक हुने गरेका कारण त्यो मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको हो भन्न मिल्ने बताए।
उनले भने, ‘अन्य रोग भएकालाई कोरोना लागेमा त्यसको असर गम्भिर रुपमा देखिन थाल्छ। कोरोनाले प्रमुख रुपमा फोक्सोमा हान्छ। पुरै फोक्सोलाई अक्सिजन ड्यामेज बनाएर अक्सिजन लिन नसकेर मृत्यु भएमा पूरै कोरोना कै कारण मृत्यु भएको देखिन्छ। फोक्सो मात्र नभएर कोरोना भएपछि अन्य रोग भएका शरीरका अंगमा पनि यसले असर गर्छ। र उनीहरुको मृत्यु चाँडो हुन्छ।’
कोरोना कै कारण मृत्यु हुनेको संख्या त कम होला। तर, अन्य रोग लागेको मान्छे त्यही दिनमा मर्ने थिए भन्ने के छ? यतिमात्र नभएर हामीले सरल के बुझ्नु पर्यो भने कोरोना अन्यरोग भएकाहरुका लागि मृत्युको कारक हो। कोरोनाले अन्यरोगसँग मिलेर मान्छेलाई छिटो मृत्युको मुखसम्म पुर्याउँछ।
कोरोना नेगेटिभ भएको मान्छेको मृत्युलाई मात्र कोरोना बाहेकका कारणबाट मृत्यु भएको भन्न सकिने डा. कोइरालाले बताए। कोरोना पोजेटिभ यदि भएको छ कसैमा र उनको मृत्यु भयो भने त्यो कोरोनाकै कारण भन्न मिल्नेमा उनको जोड थियो।
उनले भने, ‘म सानो उदाहरण दिउँ, कोही मान्छे मिर्गौला फेलियर होला। उसमा कोरोना पोजेटिभ देखियो। उसको मृत्यु भयो। यस्तो बेलामा के कारण भन्ने नै त हो नी प्रश्न। जव मिर्गौला फेलियर मान्छेमा कोरोना भेटिन्छ भने उसको शरीरमा भएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त पूर्ण रुपमा नष्ट गर्छ। उसलाई जतिसक्दो चाडो मृत्युको मुखमा पुग्न सहयोग गर्छ। त्यसैले उक्त व्यक्तिको मृत्युको कारण कोरोना नै हो।’
कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम हुनेमा विमत्ति नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘ कोरोना कै कारण मृत्यु हुनेको संख्या त कम होला। तर, अन्य रोग लागेको मान्छे त्यही दिनमा मर्ने थिए भन्ने के छ? यतिमात्र नभएर हामीले सरल के बुझ्नु पर्यो भने कोरोना अन्यरोग भएकाहरुका लागि मृत्युको कारक हो। कोरोनाले अन्यरोगसँग मिलेर मान्छेलाई छिटो मृत्युको मुखसम्म पुर्याउँछ।’
तर, सरुवारोग अस्पताल टेकुका डा. शेरबहादुर पुन भने यो अध्ययनको विषय भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले मृत्यु भएका व्यक्तिको शरीरमा कोरोना संक्रमण भेटिएमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भनेर गन्ने प्रोटोकल बनाएकोले हामीले पनि गन्दै आएका छौं। तर, यो अध्ययनको विषय भएको छ।’
कोरोनाकै कारण कुनै पनि व्यक्ति नमर्ने भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘कोरोनाकै कारण त कोही पनि मर्दैन। तर, कोरोना सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरीरहेको छ। अहिले विश्वभरी नै यही कारणले मान्छेको मृत्यु भएको हो भन्ने कुराको वैज्ञानिक प्रतिवेदन आउन सकेको छैन। अन्य रोग भएकाहरुलाई, वा मृत्यु भएकाहरुको चेकजाँच गरेको खण्डमा कोरोना पोजेटिभ आएमा त्यसको कारण कोरोना भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकललाई सबैले फलो गरिरहेका छन्।’
कोरोनाको अवधिमा अन्य वर्षहरुमा पनि अन्य रोगका कारण यो भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको ज्यान जाने गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा लगायत देशका सबै अस्पतालहरुमा पुर्याइएका र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको मात्र परीक्षण हुने गरेको र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बाहिर आउने गरेको सरोकारवालाको बुझाई छ।
जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा खोजी गरिरहेका लेक्चरल टेकबहादुर थापाका अनुसार नेपालको दूरदराजमा मृत्यु भएकाहरुको चेक जाँच नहुने र उनीहरु कोरोनका कारण मृत्यु भयो वा कालगतिले मृत्यु भयो भन्ने डाटा सरकारसँग नभएको स्वीकार गरेका छन्।
उलने भने, ‘सुविधा सम्पन्न ठाउँहरुमा मात्र केही लक्षण देखिँदै गर्दा अस्पतालमा पुर्याइन्छ। चेकजाँच हुन्छ र कोरोना भए नभएको छुट्याइन्छ अनि गणना गरिन्छ। तर, दूरदराजमा भएका हरेक मृत्युको चेकजाँच भएको खै? ती ठाउँहरुमा कोरोनाका कारण मृत्यु भयो वा अन्य कारणले भयो खोजी भएको खै?’
यस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित निकायहरुले अध्ययन गर्नुुु पर्नेमा उनको जोड रेहेको छ। कोरानाकै कारण मृत्यु भएको वा अन्यकारण मृत्यु भएको हो भन्ने विषय पनि विवादिन रहेको उनले बताए।